PAOSITRA MALAGASY : Mahajanga no nandray ny fankalazana ny andro maneran-tany
"Paositra mizara soa ho an’izao tontolo izao". Io no teny filamatry ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny paositra ny talata 09 oktobra teo. 10 octobre 2018
I Mahajanga no nampiantrano ireo fianakaviamben’ny paositra manerana ny lafivalon’ny Nosy izay tonga nanotrona io fotoam-pankalazana ofisialy ho antsika teto Madagasikara tamin’ ity taona 2018 ity. Roa andro no naharetan’io fankalazana io, izay efa nosantarina tamin’ny tam-tam mitety tanàna ho fampahafantarana ireo karazana tolotra maro samihafa azon’ ireo rehetra jifaina ao amin’ny paositra malagasy.
Nisy ny kabary nifandimbiasan’ireo tompon’ andraiki-panjakana teto an-toerana sy ny tale misahana ny fandrindrana ara-tsosialy avy ao amin’ny minisitera izay nitarika ny lanonana rehetra, sady nisolo tena ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan- davitra ary fampivoa- rana ny haitao ara-kajy mirindra.
Betsaka ireo ezaka fanatonana ny vahoaka efa vitan’ny paositra saingy tsy vitsy ihany koa no mbola miandry, hoy ny tatitra nataon’io tompon’andrikitra nisolo tena ny minisitra mpiahy io. Miandry ny tolo-tanana avy amin’ny minisiteran’ny paositra, ity orinasam-panjakana iray ity amin’ny fanatrarana ny politika anatiny ho an’ny paositra malagasy eo amin’ny fampandrosoana ny fifandraisana sy serasera.
Voatana ny fanamby
Anisany fitaovana iray mampiray amin’izao tontolo izao ny paositra, hoy hatrany ny tompon’ andraikitra ka izany no nahatafiditra ny paositra malagasy ho anisany mpikambana ao amin’ny rafitra faratampony amin’ireo firenena 192 mpikambana ao aminy U.P.U na ny Union postale universelle.
Ny paositra malagasy ihany koa no manana biraom-panjakana laharana faharoa betsaka indrindra hita eto Madagasikara, eny hatrany amin’ireo faritra saro-dalana indrindra aza, aorian’ ny biraon’ny zandarimiariam-pirenena. Manaporofo izany, hoy ny tompon’ andraikitra fa voatana ny fanambin’izy ireo dia ny hoe : "tsy misy mahasolo ny paositra, miasa ho anao, velona sy miaina ary mivoatra ho anao ny paositra malagasy", amin’ireo tolotra maro samihafa azon’ ireo mpanjifa jifaina ao aminy. Misokatra amin’ireo mpandraharaha mpanafatra entana avy any ivelany ihany koa ny paositra aminy fanapariahana izany any amin’ireo faritra rehetra eto Madaga-sikara, hatrany amin’ ireo tany heverina fa lavitra andriana indrindra aza.
Eo koa ny fivarotana ny hajia izay misy ny sary mampiavaka ny firenena iray dia mbola ny paositra malagasy irery ihany no miantsoroka izany, ankoatra ireo tolotra eo amin’ny fandefasam-bola sy ny kirakira mahakasika ny fandraharahana ny vola ho an’ireo mpisitraka izany. Misy koa ny tolotra fandefasana entana sy ny tolotra vaovao farany teo, dia ny E-mandat, fandefasam-bola haingana ary azo antoka izay isitrihan’ ny mpanjifany.
Ankoatra izay ny tolotra iarahany miasa amin’ireo tambajotran-tserasera amin’ny alalan’ny aterineto na ny internet ary ny fitehirizam-bola tsinjo lavitra, fa indrindra ny fanaterana taratasy izay mbola misy hatramin’izao ka mampiavaka azy dia azo jifaina ao aminy paositra malagasy, sampana Mahajanga avokoa. Santionany ireo rehetra ireo, hoy ny tompon’andraikitra, fa mbola betsaka ireo ezaka fanatsarana ny kalitao ny asa omen’ny paositra malagasy, araka ny politika nifanarahany amin’ny minisitera tompon’andraikitra.
Tsy nanameloka an’i Mamy Ravatomanga ny Fitsarana Frantsay FANOSORAM-POTAKA NATAON’NY HVM (244) 18 juillet 2019 Notolorana mari-boninahitra, nahazo tambin-karama mitenina 250 000 dolara EKIPAM-PIRENENA BAREA (97) 16 juillet 2019 Depiote tsy miankina 21 nanangana vondrona parlemantera iray ANTENIMIERAM-PIRENENA (87) 22 juillet 2019 Notanana am-ponja vonjimaika any Tsiafahy LEHILAHY IRAY NITORAKA POLISY (73) 19 juillet 2019 Nampiray ny Malagasy tsy vaky volo ny Barea KARDINALY TSARAHAZANA DESIRE (68) 16 juillet 2019 Voasambotra ilay jiolahy raindahiny tompon’antoka FANAFIHANA MPANDRAHARAHA (55) 17 juillet 2019